Umuthi 'Gepabene ": analogue, imfundo manual, ukubuyekezwa kanye ukwakheka
Abantu abaningi ibhekene nezinkinga ezihlobene umsebenzi sesibindi. Kungenzeka i-hepatitis okungamahlalakhona, cholecystitis. Kulezi izifo, eziwohlokayo ukugeleza Bile, okuholela yokujama tsi yayo kanye nokuthuthukiswa esingamahlalakhona hepatic. Uma uvame bakhathazekile ubuhlungu phezulu ngakwesokudla quadrant, isicanucanu futhi umunyu emlonyeni, kufanele ufune usizo kusuka owelapha. Lokhu Uchwepheshe uzoqoka ultrasound, computed tomography kwesibindi. Ngokusho imiphumela okuyikona kanye belashwe odokotela iyonikezwa. Yena ezivezile umuthi "Gepabene". It has a umsuka yemifino, futhi iziguli eziningi ukuyisebenzisa ukuqeda izinkinga ezikhona zempilo.
Ukwakheka "Gepabene" Tablets
Umuthi anezakhi choleretic futhi hepatoprotective. Umuthi has a Ukwakheka vegetal. Iyatholakala ngesimo gelatin amaphilisi. Izibhebhe abe umbala brown ukukhanya. Phakathi kuyinto powder orange-anemibala. Siqukethe ukulungiswa akhiphe ezomile amakhambi dymyanki okuyinto yakhiwa protopine, izithelo kanye somkhaya ngesimo ezomile akhiphe equkethe silymarin.
izingxenye Asizayo amaphilisi - corn isitashi, macrogol, talc, microcrystalline cellulose, magnesium stearate. I capsule yakhiwa gelatin, obomvu yensimbi oxide, ensimbi amnyama oxide, ama-titanium dioxide futhi amanzi distilled. Amaphilisi okunjalo abe Ukwakheka esiyingqayizivele "Gepabene". Analogs zomuthi izokwethulwa ngezansi.
"Gepabene" Amaphilisi Abonayo ehlangana kwengoma. Fumaria officinalis akhiphe iqukethe fumarin alkaloid. Ngenxa yalolu ketshezi aqede izinhlungu zibe kwesinye nenyongo futhi Amapayipi, Bile ingena emathunjini kalula. Futhi kuziwa eziningi uketshezi evamile kukhiqizwa.
Isithelo akhiphe ubisi somkhaya has silymarin. It ngokuphelele kusiza ukudakwa. Futhi okubaluleke kakhulu, lukhuthaza ukubukeka amangqamuzana amasha esibindini. Tablets "Gepabene" usizo lokubhekana ezihlukahlukene izinqubo sokugembula esibindini. Phezu kokuthola imithi zingene esiswini ixhuma nge Bile futhi engena inqubo eqhekeza esibindini futhi emathunjini. Lonke ulwazi lilondolozwe amaphasela Amaphilisi "Gepabene". Yokusetshenziswa, intengo, ukubuyekezwa, analogue - konke lokhu ingafundwa ngaphambi kokwelashwa.
Isikali "Gepabene" Amaphilisi
Umuthi unohlobo elula kakhulu ukukhululwa. Gelatin amaphilisi chaza ngokushesha esiswini. Wamukele Kunconywa ngezikhathi zokudla. Okuqukethwe capsule akudingekile ukuba uthele. Udinga baphuze kuphela lilonke. Ukuze ahlanze phansi izidakamizwa kudingeka amanzi amaningi. Abadala kufanele uthathe okukodwa ithebhulethi kathathu ngosuku.
Uma ubuhlungu uyakuhlupha ngesikhathi ebusuku, ngaphambi kokulala, kubalulekile ukuthatha esinye isilinganiso. Ubuningi izinga zokwelapha kumele singeqi amaphilisi eziyisithupha. Yonke lemali kufanele basakaza reception ezintathu.
Abaningi badidekile emuthini "Gepabene" intengo. Analogs yalezi amaphilisi zingatholakala ishibhile. Per iphakethe kuyodingeka bakhokhe ruble mayelana 300.
Kuze kube yileso sikhathi, imithi kungekho eyaziwa amacala yokweqisa. Uma uhlangabezana izimpawu ubuthi kufanele ngokushesha afune usizo lwezokwelapha. Lapho uxhumana nezinye izinhlobo Isikali Amaphilisi Abonayo akufanele alahlekelwe impahla yabo. Kuyinto ukuba ngokuvumelana ecacisiwe Isikali capsule "Gepabene". Analogue zomuthi futhi kumele kusetshenziswe ngokuqinile ngokusho imiyalelo.
Mhlawumbe ekwelapheni Amaphilisi "Gepabene" ukuthuthukiswa ukusabela nomzimba. Esimweni esinjalo kungenzeka ngaphezu kwalokho ukuthatha antihistamine. Ezimweni ezingavamile, kungase abe ukuchama kaningi ngokwengeziwe. izimpawu asolisayo - sohudo. Esimeni yempilo ebuthaka kufanele ngokushesha uthintane onguchwepheshe. Lezi izimpawu zingase zibonise ukuthi ukuthuthukiswa hypersensitivity.
imithi Isitolo endaweni eyomile, izinga lokushisa akumele leqe degrees 25. kuwufanele Njalo ukufihla izidakamizwa ezinganeni. Igama elithi ka ukuqaliswa iminyaka emihlanu.
Umuthi livela isitshalo. Ngakho-ke, abantu abambalwa kakhulu side effects zomuthi has "Gepabene". Yokusetshenziswa, intengo, analogue - konke ukwaziswa okubalulekile futhi kudingekile iziguli.
Izinkomba kanye contraindications "Gepabene" izidakamizwa
izindlela Medical iqondiswa njengoba umngane ku kuhlanganiswe ekwelapheni Bile yokujama tsi esiqeshini biliary. Futhi ingasetshenziswa yamafomu njalo cholecystitis, ngoba ukwelapha nokuvimbela ezihlukahlukene zokusha kwesibindi. Futhi, lapho ubuthi futhi ezingalapheki izinguquko eqinile anobuthi esibindini kungenziwa eyabelwe capsule. Lonke ulwazi mayelana nokusetshenziswa lesifanele amaphilisi "Gepabene" (yokusetshenziswa, analogs, umthamo) kufanele zihlolwe ngaphambi kokuba baqale ukwelashwa.
Akunakwenzeka ukuthatha amaphilisi ezimweni sibi sokuvuvukala kwesibindi ipheshana biliary. Contraindication engaphansi kweminyaka eyi-18. Ezimweni ezingavamile, kungase ukuthuthukisa hypersensitivity kuya izingxenye ngabanye. Phakathi amaphilisi ukwelashwa "Gepabene" iziguli kufanele bathathe kuphela labo imithi udokotela. Kufanele banamathele ngokuqinile ukudla akhethekile lwemithi, hhayi ukuphuza utshwala.
Izibuyekezo sokulungiselela "Gepabene"
Mayelana nemithi ungezwa eziningi kwamazwi emihle kokubili iziguli kanye nodokotela. Lokhu kungenxa kuyindlela engokwemvelo kwengoma. Imiphumela engemihle cishe akwenzeki. Futhi ngisho noma enazo ukweqisa izidakamizwa imiphumela ebuhlungu esingase kuyoba. Nokho, ngokuthatha izidakamizwa sisenjalo namanje ngokuhambisana imiyalelo.
Izibuyekezo ezingezinhle zivame kakhulu ephathelene ne-hypersensitivity kungenzeka kwezinye iziguli. Abantu abanemizimba komzimba nezinto, ukwelashwa kufanele aqale ngemuva kokuxoxisana udokotela.
"Gepabene" esikhundleni amaphilisi. Analogs, Ukwakheka zabo nezindawo
Kukhona inala izidakamizwa esiyingqayizivele. Banezinhliziyo Ukwakheka efanayo kanye izinkomba efanayo. amaphilisi "Levosil" kukhona ethandwa kakhulu, "Simepar", "UNILIT". Ngaphambi kokuthola esikhundleni Amaphilisi "Gepabene", intengo, ukubuyekezwa, analogue zazo kuxoxwa ngazo esihlokweni, udinga kudokotela.
Lovely izidakamizwa hepatoprotective. Ukwakheka izidakamizwa kuhlanganisa silymarin namavithamini yeqembu B. Izinkomba ukusetshenziswa ezibhekwa ngokoma kwesibindi, okunamafutha gepatsitoz, ukulimala kwesibindi anobuthi. ukungaphathwa kahle imithi kuba ezingavamile. Lokhu kungenxa kakhulu ukuqubuka iguliswa nohudo. Tablets akufanele zaphathwa izingane ezingaphansi kweminyaka engu-6. Dose ekhetha udokotela ngamunye. Ngokuvamile-ke zokhahlamba kusuka mg ngelanga 40 kuya 140. Esimeni ngokweqile umonakalo imisipha kwenzeka.
Umuthi nto inazo zonke izici njengoba capsule "Gepabene". Analogue kwaleli thuluzi Site ekwelapheni isibindi akuyona okubi kakhulu ukwedlula izidakamizwa yasekuqaleni.
gepatoprotektor Good. Ukwakheka izidakamizwa zihlanganisa ubisi somkhaya kanye B amavithamini babe gelatin amaphilisi Ukwakheka nonsundu. Top has a logo okudweba nombhalo othi "Simepar". Izinkomba ukusetshenziswa kukhona isifo sokusha kwesibindi okungamahlalakhona, isifo sokusha nokudla okunamafutha isibindi. Abantu abadala kanye nezingane emva kweminyaka 12: baphuze eyodwa capsule kathathu ngosuku, ngaphandle ukuhlafuna futhi amanzi amaningi.
Ngo ukweqisa izidakamizwa kusho "Simepar" isicelo lavage esiswini, ukwamukelwa kuboniswe amaphilisi namalahle isebenze. Izinyathelo ezifanayo, ukuba lisho ukuthi "Gepabene". Yokusetshenziswa, intengo, ukubuyekezwa, analogs yalesi izidakamizwa manje seyaziwa kuwe.
Methyluracyl wamafutha: yokusetshenziswa, izinkomba kanye contraindications
"Bifikol" izidakamizwa. Yokusetshenziswa
IsiShayina Zelenka - ukusetshenziswa kwezokwelapha
"Zyprexa": yokusetshenziswa. "Zyprexa": ukubuyekezwa, analogs kanye contraindications
Umculi Helena Yusefsson: isithombe, biography
Izinkinga eyinhloko zemvelo isisetshenziswa izisekelo umnotho Russian
Ayikho sokukhulelwa, futhi yokuhlola omuhle: Izimbangela
Isakhiwo, umsebenzi iso-cornea
Izakhiwo, zokupheka best, umonakalo kanye nezinzuzo zezinhlanzi. Ukusetshenziswa izinhlanzi obomvu